नेकपा कार्यकर्ता आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालमाथि पनि आक्रमण धन्न बाँचे , – Ranga Darpan
असोज १२ , दमौली – नेकपाका कार्यकर्ता आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । ,तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका भवन उद्घाटनका लागि गएका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालमाथि नेकपा कार्यकर्ता आक्रमणको प्रयास गरेका छन् ।
सदरमुकाम दमौलीबाट रिसिङ गाउपालिका जाने बाटोमा सत्तारुढ नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताहरुले नेता डा. रिजालमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको रिजालले बताएका हुन् ।
आफूमाथि नेकपा कार्यकर्ताहरुले हतियार र लाठीले आक्रमण गर्न खोजेको साथै गाउँपालिका कार्यालय जान नदिन बाटोमा रुख ढाल्ने ढुंगा राखेर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको रिजालले बताए ।
नेकपा कार्यकर्ताले ठाँउ, ठाँउमा रुख ढालेर हतियार, ढुंगा, लाठीसहित आक्रमण गरे साथीहरुले जोगाउनुभयो बचियो ,हरी प्रशासनको आडमा उनीहरु आक्रमणमा उत्रिए कांग्रेस नेता रिजालले भने।
कार्यकर्ता आक्रमणमा उत्रिएपनि नेता रिजाल स्थानीय नेता-कार्यकर्ताहरुका साथ अहिले गाउँपालिका कार्यालय पुगिसकेका छन् । गाउँपालिकाको बैठकले सर्वसम्मतिबाट भवनको उद्घाटन कांग्रेसका नेता रिजालबाट गराउने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको निर्णयका विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी रहेको बताइएको छ । यसैबीच कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर गाउँपालिका भवन उद्घाटनका लागि अतिथिलाई कुरेर बसेका लाखौ जनतामाथि अपमान गर्दै नेकपाका कार्यकर्ताले ‘मण्डले’ शैलीमा रिजाललाई अवरोध गरेको बताएका छन् ।
नेकपाका कार्यकर्ताले ‘मण्डले’ शैलीबाट बाटो अवरोध गरेर कांग्रेस नेता रिजाल र तनहुँको रिसिङका जनतामाथि अपमान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “पञ्चायतका ‘मण्डले’ हरुको शैली अनुसरण गर्दै नेकपाका नेता-कार्यकर्ता फासीवादी र अधिनायवादी शैलीमा प्रस्तुत भएको घटनाको म घोर भत्र्सना गर्दछु,।
” नेता पौडेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले मण्डले शैलीमा हुने गतिविधि नरोके कांग्रेस देशभर सरकारका विरुद्ध लोकतन्त्र जोगाउनका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पौडेलले दिएका छन् ।
कृषि विकास बैंक लहान शाखाका कर्मचारी पक्राउ, बैंक ह्याक प्रकरण,